Salaadda San Ramón Nonato? in laga aamuso Afka iyo Haweenka Uurka leh [+]
Ducada San Ramón Nonato Waa hubka ugu wanaagsan ee haweenka uurka leh maxaa yeelay waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah quduusiinta si gaar ah u caawiya kuwa uurka leh.
Dabcan isaga ayaa la weydiisan karaa waxyaabo kale oo isagu, iyada oo aan loo eegayn xaaladda, uu anaga noo baryi doono.
Tukashadu waa mid aad u awood badan, mana liidi karno awoodooda.
Qaarkood iimaan baa ka lumay waana sababta ay maanta dunidu tahay laakiin rajada kaliya ee aan haysanno maahan inaan lumo.
Iyada oo ducada wax walba waxaan ka dhigi karnaa wax ka sii fiicnaanaya oo markii ay jiraan xaalado adag oo nolosha ah, waxaan isku hallayn karnaa si aan u helno xoog una sii wadno dariiqa.
1 Ducada Saint Ramón Nonato Waa kuma?
1.1 Ducada San Ramón Nonato si afaf loo xidho
1.2 San Ramón Nonato duco ka dhanka ah xanta
1.3 Haweenka uurka leh
2 Quduusani ma xoog baa?
Ducada Saint Ramón Nonato Waa kuma?
Naanaysta aan naaska lahayn, oo macnaheedu yahay aan dhalan.
Waa la siiyay maxaa yeelay hooyadu waxay nafteeda lumisay kahor San Ramón oo arag iftiinka adduunka cusub ee iyada heli doona. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay ugu noqotay mid ka mid ah quduusiinta haweenka uurka leh.
Sheekadiisu waxay ku noqotaa sanadki 1200 markay ahayd waqtigii lagu dhalan lahaa, ka dib markuu qaangaar noqday caqiidadiisa aan kala go 'lahayn wuxuu u aaday Afrika halkaas oo uu ku caawiyay dad aad u badan oo badbaadiya ah.
Hadafkaaga ugu weyn ahayd inuu dhiibo isagoo ku hadlaya magaca maxaabiista qaarkood Waxay ku jireen xaalad aad u xun.
Kadib markii si xun loola dhaqmay isla garsooraha isla wuxuu amar ku bixiyay in si wanaagsan loola macaamilo fikradda helitaanka samatabbixinta qorshaysan.
Si kastaba ha noqotee, San Ramón Nonato wuxuu mas'uul ka ahaa inuu raaco wacdinta iyo caawinta kuwa u baahday iyo sida ugu dhakhsaha badan garsoorahu u xukumay dil, xukun waa laga fogeeyay sababtoo ah waxay bixiyeen madaxfurashadiisii ​​waana la sii daayay.
Ducada San Ramón Nonato si afaf loo xidho
Saint Ramon Nonato awooda aad leedahay iyo in Eebbe ku siiyay i siiyo waxaan kaa codsanayaa inaad afkaaga geliso qufulka kuwa doonaya inay igu qaldaan.
(Magac magaca qofka / yaasha)
Dadka aniga igu hadla ama igu nixiya dardaaran xun, waxay rabaan inay xumaan iga dhigaan, waxaan u shidan shumacan si aad afkaaga u xirto.
Oo waxaad fulisaa waxaan kaa codsado, maxaa yeelay, waxaad ku wacdiyey ereyga Ilaah, waxaa loo soo qaatay shahwad ahaan inaad xero galiso afkaaga.
Dhageyso tukashadayda Saint Ramon Nonato si aad u aamusto oo aad u aamusto Ilaaha Aabbaha ah hortiisa kuwa kuwa i caayaya way kuyayaan isku daygooda, Ilaaha xoogga badanuna wuu ku siiyey.
Rabitaanka gubashada ah ee lagu xoreeyo addoonsiga, had iyo jeer iga jooji afafka xun, cadowga, khiyaanooyinka.
Kuwa doondoonaya inay i dhaawacaan, Iga dhig kuwa nabad ku jooga oo ka fogaato kuwa igu sii dhaca oo dhanba.
Taasi waxaa u sabab ah masayr, shar ama xanaaq, waxaan rabaa inaan ka helo wax kuwa xun oo iga doonaya inaan ku ixtiraamo caytamayadooda, San Ramón Nonato.
Oo wanaaggaaga aawadiis, ha uga tegin baryootankayga Waan ka baryayaa Rabbigeenna Ciise Masiix.
Hadaad rabto inaad afka xidho, kani waa salaadda San Ramón Nonato saxda ah.
Ereyga Eebbe wuxuu ka digayaa sida qatarta ay u tahay waxay noqon kartaa luqadda aadanaha, faallooyinka badanaa waxay dili karaan wax ka badan qori.
Tani waa sababta gudaha kaniisadda katooliga iyo guud ahaan Masiixa waxaan aaminsanahay San Ramón Nonatos inuu naga caawin karo inaan aamusno afka kuwa furfuran ee noo horseeda si xun xun hab weyn.
Tani waa tallaabo nabadeed marka laga hadlayo falkan waxyeellada leh maxaa yeelay uma jeedno inaan si toos ah uga aargudno laakiin waxaan weydiisaneynaa inay tahay qofka saxda ah ee mas'uul ka ah xiritaanka kuwa na dhibaya.
San Ramón Nonato duco ka dhanka ah xanta
Oh, Saint Ramon Nonato caan ah, adigu, adigoo edbinaya ereyga Eebbe, oo adiga kuu xilsaartay sidii jirdil oo aad ugu xidho mawduuca afka.
Maqal gugayga oo soo hadal qaad Rabbiga Ilaaheenna ah, si kuwa kuwa i caayaya ay igu dhammeeyaan iskudayadooda, oo waan iga dhawraa wixii xun ama waxyeello leh ama ujeeddo ah ...
Fadlan, Ilaaha ugu sarreeya, oo ku siiyay Saint Ramon Nonato himilo adag oo ku saabsan xorriyadda addoonka, oo kaa codsanaya dhexdhexaadinta.
Had iyo goorba iga fogee gudbinta, iyo dembiga iga fogaada, iyo in aan ku guuleysto xasilloonida hadda jirta iyo ka dambeeyo kuwa i basaasa oo aniga i dhiba.
Isaga oo u maareynaya inuu weligiis ka soocnaado kuwa ka soo horjeedda, kuwaas oo, si kasta oo ay tahay, qallooc ama caro, ayaa aniga iga rabaa shar.
Ama waxay rabaan inay iiga sharaf xumo kuyeelashooda.
Ilaaha wax fala, waxaan ogahay inaad kujirto naxariistaada weyn, iyo faragalinta Saint Ramon Nonato, kama tagi doontid codsigeyga.
Waxaan kaa baryayaa abuuristaada, Ciise Masiix, Rabbigeenna qaaliga ah, ee isagu ku xukumi doona Ruuxa Quduuska ah oo dhan Saint Ramon Nonato.
Adiga, oo aad ugu dhow Ilaah, weydiiso dhibaatooyinkayga, in aanan waligin ka helin ilaalinimadaada iyo difaacaaga, in diblomaasiyaddaada caanka ah ay i caawiso daqiiqad kasta oo xun iyo xaalad kasta oo adag.
Hadalku waa shay xun oo badanaa dhaawici kara qoyska, saaxiibtinimada ama deegaanka shaqada. Dhibaatooyin badan iyo waxyeello ayaa si aad ah u khiyaanayn badan oo aannan garanaynin illaa sharku dhacayo.
Ducada Saint Ramon Nonato ee ka dhanka ah xanta Waxay kaa caawinaysaa in lagaa ilaaliyo sharkan.
Waxaan ku waydiin karnaa annaga ama saaxiib ama lammaane ku sugan xaalad nuglaanta.
Waxa muhiimada ah ee ku saabsan ducadan iyo guud ahaan, waa iimaanka lagu sameeyoWaa inaan aaminnaa haddii aan weydiisanno, ka dib jawaabta rabbaaniga ah marwalba way ina soo gaari doontaa, iyadoo aan loo eegin inta xaaladdu halis tahay.
Oh San Ramón Nonato daran.
Adigoo kugu soo dejiyey naxariista weyn ee aad kula macaamilayso kuwa addoommadaada ah.
Kan Quduuska ahow, ducooyinkan aan aad kuugu mahad naqayo, anigoo xusuusanaya baryadiinnii aad u qalbi qaboojiyey, oo ay ka yimaadeen xagga Ilaaha kaa dhigay mid kuu gaar ah oo haweenka uurka leh ah.
Waa tan, kan Quduuska ah, oo ka mid ah kuwa ku hoos islaaxdifa badbaadadaada iyo ilaalintiinna, iyagoo kaa baryaya in sidii dulqaadkaagu had iyo jeer loo qaddariyo dhammaan siddeeddii bilood ee aad sida gaarka ah ugu shahiiday silsiladda.
Iyo xanuuno kale oo aad kubixisay godka mugdiga ah iyo bishii sagaalaad waxaad ka tagtay dhamaan xabsiyadaas si bilaash ah, sidaas darteed Qudduus iyo qareenkeyga, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad iga soo gaarto Ilaaha iyo Sayidkayga ...
In xayawaanku ku lifaaqan qoraxyadayda ku hayaa nolosha iyo caafimaadka siddeed bilood, marka sagaalaadna xorriyadda nuurka dunidan, isagoo kaa dhigaya Kan Quduuska ah, iyo weliba maalinta naftaadu soo baxday Jirkaaga wuxuu ahaa maalin Axad ah, oo ah maalin farxad iyo reyn reyn ah, oo sidaas oo ay tahay maalinta dhalashadeeydu tahay mid ku wada qanacsan oo farxad leh, iyadoo duruufahaas aad ogtahay ay ugu habboon tahay ammaanta weyn ee Eebbe iyo adiga iyo badbaadadayda. nafta iyo tan wiilkayga.
La ducada haweenka uurka leh de San Ramón Nonato waa midka ugu wanaagsan ee aad ku tukan karto.
Ilaaliyaha aaminka ah ee kuwa ugu baahida badan, San Ramón Nonatos lama yaqaan inuu yahay caawiye weyn ama badbaadiya haweenka uurka leh.
Waxaan ogsoonahay in uur qaadida nolosha kale ay tahay xaalad qofka ka dhigaysa mid nugul.
Xaalad kasta oo deg-deg ahHaddii ay jirto uur halis sare ah ama dhibaato kale, sheygan wuxuu noqonayaa magangal weyn.
Inta lagu jiro howsha uurka waxaa lagu talinayaa in la sameeyo munaasabad San Ramón Nonato loogu talagalay haweenka uurka leh maalin kasta kaas oo kaniisadda katooliga ay si gaar ah ugu diyaarisay daqiiqaddan muhiimka ah nolosha qof kasta oo bini aadam ah.
Shuruudda kaliya ayaa ah iimaanka la codsaday.
Quduusani ma xoog baa?
Waxaa jira dad badan rumaystayaasha sheeganaya inay kaalmayntan ka heleen meeshan mar uun markay u baahdaan.
Tan iyo markii uu dhulka kujiray, wuxuu danaynayay caawinta dadka baahan iyadoon loo eegeynin ama wax u dhimaynin caafimaadkooda ama xorriyadda ay u leeyihiin hawsha.
Waxa uu had iyo jeer danaynayay waxay ahayd caawinta iyo joogtaynta iimaanka qofkasta oo uu la kulmo.
Tani waxay sii ahaaneysaa maanta, xitaa markii sanado badan ay soo mareen tan iyo dhimashadiisa, San Ramón Nonato wuxuu sii wadaa inuu siiyaa kaalmo waqtigiisu la joogo kuwa ku jira xaaladaha halista jir ahaaneed.
Si kastaba ha noqotee, iimaanku waa qarsoodiga ka dhigaya salaad kasta inay xoog yeelato, Kitaabka Quduuska ahi wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan weydiisanno waqtiyada aan u baahan nahay caawimaad iyo sidoo kale inaan uga mahadcelino nimcooyinka la isiiyey.
Waxa ugu muhiimsan waa ku tukada salaadda San Ramón Nonato rumaysad leh!